TBA CHE α-AMY Nidaamka Dheef-shiid kiimikaadka Baaritaanka Degdega ah Kit-Barta Tijaabada Daryeelka-Sinocare
TBA CHE α-AMY Nidaamka Nidaamka Dheef-shiidka ee Baaritaanka Degdegga ah
[emailka waa la ilaaliyay] Wadarta Qalabka Bile Acid / Cholinesterase / α-Amylase Reagent Kit waxaa loogu talagalay in tiro ahaan lagu ogaado wadarta bile acid (TBA), laguna cabbiro waxqabadka cholinesterase (CHE) iyo α-amylase (α-AMY) ee ku jirta dhiiga xididka dhiigga. Caafimaad ahaan, badanaa waxaa loo adeegsadaa caawimaad lagu ogaanayo cudurada hepatobiliary ama dhaawacyada, ku sumowga organophosphorus iyo cudurada ganaca.
Wadarta bile acid (TBA) waa badeecada ugu dambeysa ee dheef-shiid kiimikaad ee ku dhaca beerka waxayna ku jirtay wareegga xididdada jirka. Waxay xiriir dhow la leedahay nuugista, dheef-shiid kiimikaadka iyo hagaajinta kolestaroolka. Serum TBA waa tilmaame cilad-yare oo xasaasi ah oo loogu talagalay dhaawaca weyn ee beerka iyo cudurrada nidaamka dheef-shiidka. TBA waxay si gaar ah u muujisaa shaqada dheecaanka beerka, maaddaama TBA ay sare u kacayso mar haddii ay jirto dhaawac unugyada cagaarshowga ama cilladda wareegga qanjirada jirka.
CHE waa glycoprotein ku jirta jirka bini'aadamka qaab dhowr isozymes ah. Qiyaasta waxqabadka CHE waa hab muhiim ah oo gacan ka geysta in lagu baaro sarkhaanshada organophosphorus iyo qiimeynta dhaawaca weyn ee beerka.
α-AMY badanaa waxaa sifeeya sialaden iyo xammeetida, waxaana lagu sifeyn karaa glomerulus. Waqtigan xaadirka ah, ogaanshaha α-AMY waa habka ugu weyn ee lagu ogaado cudurka loo yaqaan 'pancreatitis'.
Nidaamka falcelinta wajiga dareeraha, iyadoo la adeegsanayo habka qiyaasta ayaa u horseeda natiijo sax ah
Natiijada waxaa lagu heli karaa 10 daqiiqo